गृह सजावटको सेवा सुबिधा र कफी सप वारिष्टालाई फरक तरिकाले बजारमा ल्याउने तयारीमा छु – Info Bazar
लकडाउनको समयलाई यहाँले कसरी सदुपयोग गर्नु भएको छ ?
अरू बेला बिहान उठे देखि राति नसुत्ने समय सम्म ब्यवसायमा नै व्यस्थ भएर होला काम काम मात्र भैईरहेको थियो ।खाना खाने सुत्ने आदि कुराको समय ब्यवस्थापन नै सही थिएन । अहिले त आफुलाइ पुरै आराम भएको महसुस भएको छ ।
अर्को कुरा यो लकडाउनको सदुपयोग गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउदै घर वरीपरिको सरसफाइमा जुटेका छौ। अनि परिवार छर चिमेकीहरु सङग रमाइलो गरी समय पनि बिताउदै छु। र बाकी फुर्सदिला समयलाई आफ्नो र कम्पनीलाई चाहिने अति आवश्यक सामग्रीहरु अरु आयातकर्ता सङ्ग डिपेन्डेट हुन नपर्ने गरी आफुले नै सिकेर आफूले नै गर्न सकिने, कम्प्युटर सम्बन्धि कृएटिभ कामहरू अध्ययन र अभ्यास गर्छु ।
अहिले यो लकडाउनको समयलाई आफ्नै लागी बिशेष पर्सनल समय ब्यवस्थापन गर्दै छु । समयमा खाना खाने,सुत्ने,उठने,ध्यान गर्ने,व्याम गर्ने र व्यावसायको लागि भनेर आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने बानी बसाल्दै छु ।
अबको दिन व्यवसायमा भारी गिरावट आउने पक्का छ। आफ्नो व्यवसायको फजुल खर्चहरु मिनिमाइज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा र अलि अलि कफिको बारेमा सेल्फ स्टडी गरिरहेकाे छु ।
समग्रमा राम्रो र रमाइलो अनि सुरक्षित तरिकाले बिताउदै छु ।
सरकारले गरेको लकडाउन लाई पुर्ण रूपमा साथ दिदै आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयाेग गरेको छु ।
-लकडाउनले यहाँको व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ?
बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको यो माहामारीले व्यवसायमा मलाई मात्र नभएर समग्र व्यवसायीहरुलाई ठुलाे असर पारेकाे छ । भोलीको दिनमा हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने भयवित अवस्थामा हाम्रो व्यवसाय पुग्ने अबस्था छ । पहिलाे कुरा त हाम्रो व्यबसाय भन्दा पनि पहिला हामी कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा रहेकोले अहिलेको समय व्यवसायमा परेको असर भोलीको दिनमा यसले कस्तो असर गर्छ होला भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन।
-कफी सप र वारिष्टा ट्रेनिङ नेपालमा अवसर र चुनौती र गृह सजावटको बारेमा केही बुझाईदिनु न
कफि सप अहिलेकाे अवस्थामा अतिनै राम्रो व्यवासयको रुपमा स्थापित भएको छ । सानो कफि सप संचालन गरेर आफ्नो घर परिवार चलाउन पनि सकिने सजिलो र धेरै झन्झट पनि नभएको कारणले यो व्यवसाय धेरैको रोजाइमा परेको छ । अवसर जति छन चुनौती पनि उती नै धेरै पनि । हुन त चुनौती सबै व्यवसयमा हुन्छ्न नै तर पनि कफि सप अहिलेको अवस्थामा धेरै भैईसकेको ले सिमित बस्तु बेचेर धेरै सङग प्रतिस्पर्धा गरेर लगानी अनुसारको आम्दानी लिन धेरै गारो छ । अझै धेरै कफि सप खुल्ने क्रम रहेकोले पनि कफि सप नचलेर बन्द गर्नु पर्ने स्थित पनि आउन सक्ने अबको मुख्य चुनैती हो । कफि पिउदा हुने फाइदाहरु,कफि पिउदा हाम्रो दैनिकीमा ल्याउने सकारात्मक फाइदाहरुको जानकारी नभई फेसनको रुपमा अहिले कफि पिउने चलन धेरै रहेकोले कफि पिउदा हुने फाइदाहरु बुजाएर कफि पारखीको संख्या बढाएर व्यावसाय गरियो भने यो व्यवसाय धेरै नै राम्रो छ । वारिष्टा ट्रेनिङकाे पनि राम्रो नै छ ।दक्ष ब्यक्तीबाट गुणस्तरीय सीप दिन सक्नु पर्यो राम्रो छ । सीप सिकाउने र केही मात्रमा नाफा मुलक तरिकाले गरियो भने संचालन गर्ने र सीप सिक्ने दुबैलाई धेरै राम्रो छ । तर अहिले यो छैन बिदेश पद्न जाने बिद्यार्थीहरुलाई नै फोकस गरेर उनीहरुको बाहिरको ईन्टेक हेरि क्याल्कुलेट गरि तेहि समय आसपास यहाँ कक्षा संचालन गर्ने धेरै भएकाले भोलिका दिनमा यो ट्रेनिङले जति मार्केट लिनु पर्ने हो र जति दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्ने हो त्यती उत्पादन हुन सकेको छैन।
गृह सजावट यो मेरो interior design सम्बन्धि व्यवसाय भएकाले अहिलेको अवस्थामा हामी सबैलाई घर,अफिस, होटेल रेस्टुरेन्ट,गेम हलअरु धेरै प्रकारका व्यवसाय लाई चाहिने अति आवश्यक रहेको व्यवसाय हो । गृह सजावटबाट interior design सम्बन्धि सम्पुर्ण काम गर्दै बिगत ३ बर्ष देखि न्युरोडमा संचालन गर्दै आएको छु । interior design संग सगै थाईलेनकाे पार्केटिङ , ढाेका अरू धेरै कुराहरु बेच्दै आएका छौ ।
याे व्यवसाय नेपालमा नयाँ नै छ झन पोखरामा त धेरै नै नयाँ। बिस्तारै सबैले बुज्दै गएका छन । पहिलाको दिन भन्दा धेरै राम्रो हुँदै पनि आएको छ। यो व्यवसायमा चुनैतीहरु पनि धेरै छन ।
आगामी मेरो योजना गृह सजावटको सेवा सुबिधालाई फरक तरिकाले बजारमा ल्याउने तयारीमा छ् र मेरो कफि सम्बन्धि योजना छ जुन योजना २०१९ मा कफि घर प्राली को सुरुवात गर्ने २०२० मा कफि घरलाई ब्यवस्थित रुपले संचालन गर्ने र कफि ऐकेडेमि संचालन गर्ने , २०२१ मा आफ्नै कफि फाम गर्ने र उत्पादनलाइ अगाडि बढाउने , २०२२ मा अन्य शाखाहरु बिस्तार गर्ने रहेको छ । अहिले सानाे अौटलेटको रूपमा मात्र संचालन भएको हुनाले याे बर्ष मेरो दोस्रो योजना तिर नै लागेकाे छु छिटै ब्यवस्थित तरिकाले अर्को नया स्थानमा कफि घर ,कफि ऐकेडेमि, र बेकरी उत्पादन आउने छ ।
This Page Total Views: 1,300
बजार नपाएपछि बोटमा नै केरा पाक्न थाले